ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း(mask)ကို ဘာကြောင့်စနစ်တကျလုံခြုံအောင် တပ်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာလဲ? အခြားသူများအားရောဂါကူးစက်စေခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ကူးစက်ခြင်းမခံရအောင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကိုမမေ့မလျော့သတိပြု ဖုံးအုပ်တပ်ဆင်ပါ။ ဤအစီအစဉ်ကို Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနားမကြားသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားဖြင့် ပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါသည်။ | Myanmar Deaf Community Development Association (MDCDA)
Home > Videos > COVID 19 News > ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း(mask)ကို ဘာကြောင့်စနစ်တကျလုံခြုံအောင် တပ်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာလဲ? အခြားသူများအားရောဂါကူးစက်စေခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ကူးစက်ခြင်းမခံရအောင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကိုမမေ့မလျော့သတိပြု ဖုံးအုပ်တပ်ဆင်ပါ။ ဤအစီအစဉ်ကို Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနားမကြားသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားဖြင့် ပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါသည်။
ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း(mask)ကို ဘာကြောင့်စနစ်တကျလုံခြုံအောင် တပ်ဆင်ဖို့လိုအပ်တာလဲ? အခြားသူများအားရောဂါကူးစက်စေခြင်းနှင့် ကိုယ်တိုင်ကူးစက်ခြင်းမခံရအောင် ပါးစပ်နှင့်နှာခေါင်းစည်း (Mask) ကိုမမေ့မလျော့သတိပြု ဖုံးအုပ်တပ်ဆင်ပါ။ ဤအစီအစဉ်ကို Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနားမကြားသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားဖြင့် ပြန်လည်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပါသည်။